लेख | BARDIYA ONLINE | | Page 2
बाह्र वर्ष लागिसकेछ। अस्ति भर्खर कक्षाकोठामा छिर्न थालेको जस्तो लाग्छ। हुन त नितान्त सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने गरी काम गर्ने सुअवसर पाएको छैन। तर पनि सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थामा वैध सेवा गरेको हुँ। थोरै तलब खाईपाई आएकोमा पनि राज्यलाई कर त तिरेकै छु। जसरी पनि सरकारी निकायसँग मेरोे ‘अट्याचमेण्ट’ छ। मेरो तीन पुस्ते पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कुनै कुनामा ट्वाल्ल [पूरा पढ्नुहोस्]
बिस बर्षपछि भएको स्थानिय निकायको निर्वाचनले हरेक जनतामा विकास, सम्वृद्धि र राजनितिक स्थायित्वको आशा पलाएको छ । जनताले उत्साहापुर्ण,कर्तव्य बोधसहित र सचेतताका साथ निवार्चनमा भाग लिए । आजसम्म रोकिएको विकास र सम्वृदिको बाटोलाई पुन अगाडि बढाउनु, जनतामा मरेको विश्वास र भरोसालाई जगाउनु प्रमुख दायित्व अबका प्रतिनिधिको हो । देश परनिर्भरतामा मात्र आधारित नभई आर्थिक, राजनितिक तथा [पूरा पढ्नुहोस्]
स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरुको लाइन हेर्दा नै प्रष्ट हुन्थ्यो कि हाम्रो समाज पुरुषविहिन बन्दै गइरहेको छ । तस्वीरले पनि बोलिरहेको छ कि यो लाइनमा महिलाहरुको संख्या चालीस जनाको हाराहारीमा देख्न सकिन्छ भने पुरुषको संख्या जम्मा तीन जना मात्रै । ल हेर्नुस् ! अब यसलाई के भन्ने कसरी विश्लेषण गर्ने हाम्रो समाजको अवस्था कहाली लाग्दो छ कि छैन ? यो खालको परिस्थिती किन [पूरा पढ्नुहोस्]
०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि राजनितिक रुपमा जनताहरु सचेत र जागरुक भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । हिजो आज बर्गिय रुपमा पिछडिएका जनताहरु आत्मअधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्षम भएका छन र उनिहरुको सक्रिय राजनितिमा सहभागिता पनि भएको पाईन्छ । विगतमा सामन्ती राज्यसत्ताबाट दबिएका, दबाइएका, निषेध गरिएका र उपेक्षा गरिएका जनता नै खासगरि पछिल्लो समयमा राजनितिमा सक्रिय [पूरा पढ्नुहोस्]
एउटा सम्बोधन बिनाको पत्र । सम्बोधन गर्न कुनै नाता नभेटीएकोले सम्बोधन बिनै लेखिएको पत्र । काल्पनिकता लागेमा संयोग मात्र हुनेछ, यो पत्र । तिमीलाई याद छ की छैन, २०६२ पुस १७ गते हाम्रो दोस्रो भेट भएको थियो । पहिलो भेटकोे मिति याद छैन, त्यसको खासै तर तिम्रो त्यो अबोध अनुहार अझैपनि मेरो स्मृतिमा ताजा छ । दोस्रो भेटपछि नै हो हाम्रो मित्रता झाङ्गिएको । तिमी ८ कक्षामा पढ्थ्यौ, म ७ मा । [पूरा पढ्नुहोस्]
पृष्ठभूमि आजको यस उत्तर आधुनिक काल (Post Modernism) एवं विकासको चरम सिमामा पुगेको यस संसारमा अझै पनि ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरुको मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषण भइरहेको अवस्था छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपाल विकासशील राष्ट्र भएकोले यहाँ पनि अझै धेरे बालश्रम लिई शोषण भइरहेको छ । कुनै पनि देशको नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनछ । यसै सन्दर्भमा [पूरा पढ्नुहोस्]
यो समय कती छिटो छिटो चल्छ है ? थाहै हुँदैन समय बितेर गएको । तिमी संग चिनजान भएको पनी आठ वर्ष पुग्न लागी सकेछ । अनी यो पुग नपुग आठ वर्षको यात्रा खै कसरी कसरी बिते थाहै भएन । मलाई यकिन याद त छैन कि तिमी संग पहिलो पटक कहाँ बोलेको थिएँ तर मलाई सम्झनामा भए सम्म विद्यालयमा रेडक्रसको पुर्नगठनबाट परिचय भएको थियो हाम्रो । त्यो परिचय त्यति मै सिमित रह्यो म अध्यक्ष, तिमी उपाध्यक्ष अनी अरु [पूरा पढ्नुहोस्]
तराईको सबैभन्दा पिछडिएको जिल्ला हो बर्दिया । पहिला–पहिला बर्दियाभन्दा काठमाडौंका मानिसलाई भारतको कुनै ठाउँ हो कि जस्तो गर्थे। नेपालगन्जसँग जोडिएको जिल्ला भनेपछि ‘ए, बाँके बर्दिया !’ भन्थे । बर्दियाको छुट्टै अस्तित्व स्विकार्दैनथे । वामदेव गौतम पहिलोपटक गृहमन्त्री भएपछि बर्दिया चर्चामा आयो । उनले आफू जितेको १ नम्बर क्षेत्रमा बबई नहर परियोजना ल्याएपछि झन् चर्चामा आयो । [पूरा पढ्नुहोस्]
आफ्नो गाउँठाउँ बिकासका लागि आफै किन नजुट्ने ?
सामाजिक विकास र समाज परिवर्तनको चाहना सबै नागरिकमा छ । नागरिकहरु व्यक्तीगतरुपमा यस्तो चाहना पुरा गर्न सक्दैनन् । हुनत: राज्य संयन्त्रबाट यस विषयमा चासो राख्नु पर्ने हो तापनि हाम्रो जस्तो अन्योल ग्रस्त राजनितीबाट गुज्रेको मुलुकमा यस किसिमको चाहना तत्काल पुरा हुने देखिदैन । राज्यले चाहे परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने हाम्रै जस्तो भुपरिवेस्ठित छिमेकी मुलुक भुटानले शिक्षा र [पूरा पढ्नुहोस्]